ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း 10 ဓာတ်ပုံအမှား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 05 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အောက်ပါမဒဏ္ဍာရီစာရင်းနှစ်ရှည်လများအွန်လိုင်း daters နှင့်အဓိကကျတဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်များနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမှစုဆောင်းခဲ့သည်. အောက်ခြေလိုင်းဆိုတာဘာလဲ? အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဓာတ်ပုံများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအားရိုးရှင်းသောလုပ်ရပ်ကကိုင်တွယ်ပုံဖြစ်သည်.
1. မှာအားလုံးဓာတ်ပုံတပုံတင်မယ်မ. အားလုံးတစ်ဦးဓာတ်ပုံတင်မယ်မစ U ်အရှိဆုံးအလေးအနက်အမှားဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအလွတ်တခုကိုနေရာတခုဖြစ်တယ်လျှင်သင်ပုန်းဖို့တစ်ခုခုရှိရမည်. ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ, လူတိုင်းကတော့ဒီလိုစဉ်းစားတွေးခေါ်. ထိုအသားဝါထားသောစာပိုဒ်တိုများ “ငါ့ရုပ်ပုံလွှာကိုမေး” ဤသည်နေ့ရက်ကာလတော်တော်လေးခြေဆွံ့သေ​​ာသူကိုကြားရ၏. စကားတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်းခြေဆွံ့သေ​​ာသူကို, လွန်း.
2. ထက်ပိုသောဓာတ်ပုံကိုယ်ရေးစာမျက်နှာ2သို့မဟုတ်3အသက်အနှစ်. သင်အလွန်အကျွံအဟောင်းတွေသင်ပုံကိုထက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်၏အပြစ်ကျူးလွန်င် “အသက်အရွယ်ကိုရိတ်” အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း. ဒါဟာအစမှတုန်ခါမြေပြင်ပေါ်မှာသင်တို့၏ဆက်ဆံရေးထားရန်အာမခံချက်နှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဖြစ်ပါတယ် “အနိုင်အထက်ကိုင်တွယ်။” ဒုတိယရက်စွဲဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှအဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်တွေးမိ? ဒါဟာသင်ဆိုလျှင်သူတို့သည်သင့်မပြောလိမ့်မယ်မြဲအလောင်းအစားကိုဖွင် “အသက်အရွယ်ရိတ်”.
3. ကိုနောက်ခံသင်၌ကနည်းနည်းပုံဖြစ်ပါသည်? သင့်ရဲ့ image ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်စေမနိုင်အောင်သေးငယ်သည် အကယ်. သင်သည်တင်းပါး-အရုပ်ဆိုးဖြစ်သို့မဟုတ်ပုန်းဖို့တစ်ခုခုရှိရမည်. Blade ကို. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကဓာတ်ပုံရယူပါ. ကျနော်တို့ပြီးသား Yosemite ကိုမြင်ရပါတယ် – လူတစ်ဦးအတွက်.
4. ထူးဆန်းတဲ့သို့မဟုတ် goofy စကားရပ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုသုံးခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်မကျရောက်စေ. ကိုသာတရားမျှတစွာတက်ပိတ်လိုက်ရင်, လတ်’ ကိုယ့် unmentionable တစ်ခုခုအနံ့ကိုခံ ယူ. တူကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုသင်တို့အားရှိသည်ရှင်းလင်းသောပုံကိုကြည့်ရှု, ကပိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်သည်အချိန်င်. ရှိတ်စပီးယားကြောင့်ပင်စကားပြေသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းမှာယစ်မူးကဖန်တီးရွားပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်မကျော်လွှားနိုင်, သို့မဟုတ်ပိုဆိုး, ကထိတ်လန့် “ရှေ့မီးအတွက်သမင်ဒရယ်” ကြည့်ရှု.
5. မင်းလား – သို့မဟုတ်သင်ဘယ်ဘက်မှတစ်ခုဖြစ်ပါသည် – သို့မဟုတ်သင် background မှာတည်း? အဘယ်ကြောင့်သင်ပါးပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့-ရှာဖွေနေလူကိုနမ်းနေကြတယ်? သင့်ရဲ့မြည်းပေါ်မှာမိမိလက်နှင့်ထိုလူကိုအဘယ်သူသည်? သူတို့အသင်၏မိဘများဖြစ်ကြသ? ကျနော်တို့ခန့်မှန်းရန်ရှိပါကသို့မဟုတ်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုစာသားထဲမှာကရှင်းပြဖို့ရှိပါက, ကသိပ်နောက်ကျင်. ဒါကြောင့်၌သင်တို့ထက် ပို. လူတို့နှင့်အတူဓာတ်ပုံတပုံကိုတင်လိုက်တယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားပါ, အထူးသဖြင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်(့) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်ကြ၏, သင်၏ဓာတ်ပုံသည်ကောင်းထင်နေရင်တောင်.
6. သူတို့ကိုအကာမျက်မှန် Takeoff. Going incognito ငါတို့? ဂျိုးဟောလိဝုဒ်ဖွင့်ခြင်း?နေကာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ထားရုံသင်ပုန်းဖို့တစ်ခုခုရှိသည်အကြံပြု.
7. ထိုပါတီ Youat, ဦးခေါင်းရယ်မောခြင်းတွင်ပြန်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်, လက်တော်၌ဘီယာ, သင့်ကိုငါတို့ puke စေအများကြီးပျော်စရာ havingso. ဒါဟာငါတို့သည်သင်တို့ getdrunk ယုံကြည်မယ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်5ညဉ့တစ်ပတ်လျှင်, ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုယူသင့်ပါတယ်.
8. သင်အွန်လိုင်း shoulduse သောဓါတ်ပုံကိုသင်ပြောပြရန်သင့်မိခင်သို့မဟုတ်အစ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်း. သင်၏အမိသည်ချို looksabsolutely ပင်သင့် goofiest ရုပ်ပုံလွှာထင်သည်. သင့်ရဲ့အမြင်ဘက်လိုက်သည်, လွန်း. အဲဒီအကြိုက်ဆုံးသင်တကယ်ကြည့်ထင် photothat, တကယ်ကိုကောင်းမလာနိုင်တဲ့. အဲဒီအစား, သင်အွန်လိုင်း shoulduse သောဓါတ်ပုံ someoneof သင်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရသောဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုမေး. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ photo'seffectiveness ၏တစ်ခုတည်းသောအတိကျဆုံးတိုင်းတာမယ့်. အဘယ်ကြောင့်? သင်အွန်လိုင်းသင်၏ဓာတ်ပုံ post သည့်အခါဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, you'llbe ရုံထိုသို့သောအထင်ကြီး – သို့မဟုတ်ထိုသူတို့ကိုအထင်ကြီးမ – တစ်ဦး thousandtimes တစ်နေ့.
9. Showingtoo အများကြီးကအရေပြား. you'rea သောမိန်းမဆိုရင်ဒါကမှားယွင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုများကိုရလိ​​မ့်မယ်, အများအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှာအားလုံးလူတယောက်ကိုသင်ဆိုရင်. အဲဒီမှာ areexceptions, ဒါပေမယ့်မကြာမ.
10. သင့်ရဲ့ crappy တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ Using သင် professionalphotos သည်ကို အသုံးပြု. ထင်သောကြောင့် “လိမ်လည်”. professional အရည်အသွေး Using အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကျွမ်းကျင်သူများသင်အလေးအနက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ takeyour လျှင်သင်တို့ပြုအကြံပြုပထမဦးဆုံးအရာ photosis. စင်စစ်သင့်ကျန်းမာရေးကိုမကိုးစားကြပါ,သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုဖြစ်စေ, အပျော်တမ်းမှပင်သင့်ရဲ့ဆံပင်ညှပ်. အဘယ်ကြောင့်တဦးတည်းမှသင့်ရဲ့အွန်လိုင်း image ကိုစိတ်ချယုံကြည်? professionalphotos နှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့သောပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမျက်နှာဝတ်ဆင်ဖို့သင့်လျော်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.